Ny andro manerantany iadiana amin’ny SIDA taona 2010 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Septambra 2019 3:39 GMT
Miorina amin'ny firaisankina manerantany ny Andro iraisam-pirenena iadiana amin'ny SIDA, ary amin'ity taona ity, dia mandeha ny fanentanana Hazavana ho an'ny Zo. Mandrisika ny olona any amin'ny tanàna manerana izao tontolo izao mba hampihena ny jiro eo amin'ny sehatra manan-danja ny fanentanana mba hahatsiarovana ny loza mahatsiravina ateraky ny fiantraikan'ny SIDA, ary hampiharihary ny zo fototra iarahantsika rehetra. Ny jiro ho an'ny zo dia hitranga any amin'ny kontinanta rehetra ary azonao atao ny manaraka ny any akaikinao amin'ity sarintany ity.
Mibilaogy miabo [=miaina miaraka aminy]
Hirika lehibe hizarana fahalalana sy hanapariahana hevitra mampivoatra mahakasika ity aretina mandringana ity ny Andro Manerantany iadiana amin'ny SIDA. Mampiseho ny fomba ahafahana mampiasa ny mediam-bahoaka amin'ny aterineto ny torolalan'ny Rising Voices “Mibilaogy miabo” mba hanaovana fanentanana sy hiresahana momba ny VIH/SIDA manerana izao tontolo izao .
Ny 2 desambra (11 ora maraina EST na 4 hariva GMT), manohana fifanakalozan-dresaka mivantana [antserasera] ny Rising Voices mba handinihana izay tokony ho dingana manaraka ho an'ny Toro-lalana Mibilaogy miabo, ao anatin'izany ny fomba ahafahana mampiasa azy amin'ny fiarahamonina samihafa. Raha liana amin'ity lohahevitra ity ianao ary manana hevitra mikasika ny fomba ahafahan'ny fampahalalam-baovaon'olon-tsotra manampy amin'ny fanentanana momba ny VIH/SIDA manerana an'izao tontolo izao na raha te-hahalala bebe kokoa momba ny Rising Voices ianao, dia miaraha aminay ao amin'ny fifanakalozan-dresaka mivantana ato.
Ny lahatsoratra Global Voices voatsonga tamin'ny taona 2010 mikasika ny VIH/SIDA
30 Sep – Afrika: Natao momba, niharan'ny fanavakavahana ary nahilikilika ireo vehivavy miaina miaraka amin'ny VIH
06 Sep – Shina: Mendrika hasambarana i Tian Xi
03 Apr – Ozbekistan: Nafenina ny otrikaretina VIH, nosaziana ireo mpanao fanentanana manohitra ny SIDA
03 Feb – Satria efa milamina i Liberia, manomboka miresaka momba ny firaisana ara-nofo ny tanora
24 Jan – Arabia Saodita: mihemotra ny fitsaboana ny SIDA